> Resource > Lugood > Top 10 Scripts Lugood u Lugood
Ma maktabadda Lugood aad ka buuxaan heeso mislabeled? Waxaad u baahan kartaa qalab si aad u hesho dhammaan macluumaadka maqan ururinta music aad iyo qaado maktabadda abaabulan music si ay u tagaan. Baro More >>
Waa maxay Lugood Script?
Scripts Lugood waa mid noocee ah AppleScript u Lugood. Waa maxay AppleScript? Waa luqad fudud barnaamijyada in kaliya ka shaqeeya Mac si loo xakameeyo iyo qalabayn falalka . AppleScript horay waxaa laga heli karaa on your computer, wixii aad samayn doonto waa in ay qoraan ama qabnay si aad u hesho wax lagu qabto. Scripts u Lugood maamuli kartaa kuwan raadkaygay, farshaxanka, playlists, iPod, faylasha, iwm Waxa kale oo ay xakamayn kartid Lugood, macluumaad dhoofinta, oo la shaqeeya codsiyada kale, iyo iyo. In eray, qabnay Lugood sameeyo Lugood sameeyaan waxyaalo aan asal ahaan u samayn karaa, ama waxa ay sameeyaan wax ka fiican.
10 Scripts waxtar leh In kor loo qaado Lugood
# 1 Super saar Tracks Dead
Lugood ayaa ugu baaqay kuwan raadkaygay dhintay oo la tilmaamay ah "!" xiga magaca. Supre saar Tracks dhintay caawisaa cad ilaa maktabadda music aad ka mid click. Waxaa ka shaqeeya oo keliya OS X 10.6 ama 10.7
Pandora Search , oo hore "Raadi Pandora Stations", furi doonaa default browser si ay u baadhaan Pandora.com u Artist, Album, ama macluumaad laxamiistaha.
# 3 Import iPod files audio
Ma jiraan gabayo aad iPod in aanu jirin in Lugood? Isticmaal this script Lugood in ay dajiyaan kuwan raadkaygay loo doortay in ay iPod. Laakiin ogow in ay la jaan qaada MA iPhone / iPod taabto, oo waxay u baahan tahay iPod la dhigay in "Gacanta maamuli music iyo videos". Si aad u wareejin files effortlessly dhexeeya iPod / iPhone / iPad iyo Mac, isku day TunesGo Wondershare (Mac)
Tani script Lugood abuuraa ah "Block Party" playlist ee random Artists iyo tiro gaar ah oo heesaha ay kala sooc lahayn doortay. The playlists ahbaa isgreat xisbiyada.
# 5 Samee PDF Buugga
Script Tani waxay abuurtaa buug-PDF ay ku jiraan info ka kuwan raadkaygay soo xulay oo ka dibna waxa nuqul in playlist halkaas oo kuwan raadkaygay xulay degan tahay. Download "Samee PDF Buugga" hadda .
# 6 Search Google Lyric
Waxa ay sheegtay Ma. Si dhakhso ah u furo default web browser, iyo isticmaalaa magaca iyo artist ah track hadda ama la doortay si ay u baadhaan lyrics la Google. Get Search Google Lyric.
# 7 Ururiya One-Hits
Ururiya One-Hits , sida ku cad magaceeda by, isla ururiyaan oo dhan "yaabab hal-hit" maktabadda Lugood aad - nuqul ka track kasta oo maqal ah oo artist ka wakiil yahay kaliya track hal playlist cusub, iyo inuu kala go'aansado hadii si aad u hesho kuwan raadkaygay dheeraad ah artist in.
# 8 badalo Quick
Waxaa ( Download link ) badasha oo dhan ama xaqa kuwan raadkaygay la doortay ee playlist la isticmaalayo encoders heli karaa Lugood. Waxa kale oo ay ku badbaadin karto encoded AAC kuwan raadkaygay sida M4B "bookmarkable" (wadada dib u bilaabi doonaan ciyaaro meesha aad iska daayeen marka aad u ciyaaray markii ugu danbeysay ee.) Iyo dib-u-dar files gediyay maktabada buugaagta. Wixii video Converter xirfad kasta oo video, isku day Video Converter Ultimate.
This script Lugood Kaliya waa script bixisay in artilce this. Waxaad ku iibsan karto Mac App Store u $4.99 USD. Feature ugu muhiimsan ee mySpins waa in ay kormeerayaasha iyo lafaguridda maktabadda music Lugood iyo bandhigayaa heeso aad ugu soo ciyaaray diyaarin iyo kaalinta kala duwan ee gooldhalinta dareen leh.
Waxaad sidoo kale laga yaabaa in badan oo ku saabsan script mySpins Lugood bartaan halkan .
# 10 Script toobiye Kan sameeyey,
Durba rakibi aad u tiro badan qabnay Lugood iyo adag tahay in la soo helo. Marna ha ka fikiraan, yeelaan toobiye keyboard si script kasta oo arrintan ka Kan sameeyey Script toobiye .
Sida loo isticmaalo Scripts Lugood
The Scripts Lugood inta badan waa file a xirmo hal. Sidaa darteed, kaliya AppleScripts in ay [username] / Library / Lugood / Scripts / folder (haddii aan ka jirto, la abuuro hal), oo markaas waxaad iyaga ku heli karto script menu ee Lugood.